Lova hetra dia nofoanana - Ny zavatra draharahan'ny Hetra - Ny mpisolovava ny Norvezy! Zavatra Mpisolovava, ny ara-dalàna vavahadin-tserasera.
Ny mpisolovava ny Norvezy! Zavatra Mpisolovava, ny ara-dalàna vavahadin-tserasera.
Lova hetra dia nofoanana - Ny zavatra draharahan'ny Hetra
Ny lova hetra dia nofoanana avy amin'ny zavatra Parlemanta
Lova hetra dia nofoanana tamin-kery avy amin'ny iray volana janoaryIzany dia midika fa tsy tokony TSY hanaiky lova na fanomezana fampahafantarana ho an'ny misy lova na fanomezam-pahasoavana ianao dia nahazo mandritra na aorian'ny. Na izany aza, dia tsy maintsy manambara na inona na inona ny lova izay nandova avy ny olona maty tamin'ny taona, na ny teo aloha. Tsy maintsy ihany koa ny hilaza na inona na inona fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo tamin'ny. Ny fanapahan-kevitra ihany koa mitaky ny ofisialy ny fananana mpitantana sy ny mpiara mpandova very ny zo hahazo vaovao. Ny lova hetra dia nofoanana noho ny lova avy amin'ny olona izay maty iray volana janoary na taty aoriana. Izany dia mihatra ihany koa ny fanomezam-pahasoavana nanome iray volana janoary na taty aoriana. Izany dia misy fiantraikany eo amin'ny zo hahazo vaovao ho teo aloha ny toe-javatra momba ny lova hetra. Ny Lova Hanao fizarana faha, andalana roa mametraka ny lova hetra fahefana amin'ny tena hentitra adidy ny tsiambaratelo. Amin'ny manaraka, afa-tsy ny tombontsoa mivantana amin'ny lova hetra raha manana hahatakatra ny raharaha momba ireo antontan-taratasy. Ankoatry ny, - baovaom-panjakana ireo mpitantana izay mila fanazavana mba manao kajy ny marina lova hetra na ny mpiray mpandova izay mety ho tompon'andraikitra hafa ny olona lova hetra (mpiray sy ny maro madio) afaka mahazo ny fidirana vaovao sasany. Satria ny lova hetra dia nofoanana, ny fototry ny zo hahazo vaovao fa ny sasany nahazo, dia tsy misy intsony ankehitriny. Izany dia midika hoe: Ny zavatra Parlemanta nanapa-kevitra ny hanafoana lova hetra avy amin'ny iray volana janoary. Izany fiovana izany dia misy fiantraikany eo ny fanomezam-pahasoavana nomena taorian'ny amby telo-iray volana desambra sy ny lova izay ny fahafatesana nitranga rehefa telo-polo amby iray volana desambra.
Tsy tokony hanaiky ny lova na fanomezana fampahafantarana ny Hetra Fitantanana ny fanomezana sy ny lova noraisina nandritra ny taona, na taty aoriana.
Lova hetra amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena talohan 'ny fiafaran' ny taona tokony aloa araka ny fitsipika sy ny taha izay ampiharina amin'ny. Toy izany koa ny lova aorian'ny fahafatesana izay nitranga tamin'ny. Mihatra na dia ny tombontsoa voalohany mahazo ny fidirana ho any amin'ny lovany tamin'ny taona, na taty aoriana. Ny fanapahan-kevitra dia midika fa ny rehetra no maty tamin'ny taona, na tany aloha dia iharan'ny hetra. Izany dia mitaky fa tsy misy afa-tsy ny hetra amin'ny alalan'ny fitakiana ny vahoaka ny fisarahana, na dia ny fitondram-bahoaka ny maty ny toetrany mifarana ny taona, na taty aoriana. Mihatra koa izany raha toa ka nitaky izany ny toetrany dia niverina tsy miankina sampana amin'ny na taty aoriana. Ny zavatra Antenimiera noho izany dia nanao ny hetra fanapahan-kevitra ho amin'ny taona azo ampiharina amin'ny hetra-maimaim-poana ny vola sy ny taha.
Ny hetra adidy rehefa mipoitra ny fanomezam-pahasoavana dia heverina ho efa nomena.
Ho an'ny ankamaroan'ny fanomezana zavatra, izany no mitranga rehefa ny fanomezana fanambarana dia efa naniraka ny Fitantanana ny Hetra. Raha misy fanomezam-pahasoavana nomena talohan'ny iray volana janoary, ny fanambarana dia tsy maintsy nalefa tany an-draharahan'ny Hetra. Fanomezam-pahasoavana nomena talohan'ny niherina ny taona dia iharan'ny hetra na dia ny lova hetra fanapahan-kevitra dia tsy nahazo mialoha ny. Midika izany fa raha misy fanomezam-pahasoavana nomena azy, dia tsy azo foanana intsony amin'ny fomba izay misy fiantraikany eo ny hetra kajy. Ny fisintonana ny fanomezam-pahasoavana dia mety mitarika ny hetra vaovao mendrika ny raharaham-barotra sy ho anao mety ho avo roa heny ny hetra. Ny fitsipiky ny fanohizana amin'ny ankapobeny fa ny famindrana ny fandovana sy ny fanomezana ny zava-kery eo amin'ny iray volana janoary. Hetra fitohizan'ny dia midika fa ny mpandova na ny fanomezana mpandray mandray ny maty ny olona, na mpanome ny torohevitra sarobidy amin'ny nafindra zavatra ao ny fanapahan-kevitra taty aoriana dia ho avy ny tombony sy ny hafa hetra ny toerana mifandray amin'ny transferences. Ny fampidirana ny iray afa-tsy avy amin'ny fitsipiky ny fanohizana (discontinuity) dia nekena ho an'ny fananana toeram-ponenana, trano fialan-tsasatra, toeram-piompiana sy ny ala izay mety efa namidy ny hetra maimaim-poana ny olona maty na ny mpamatsy vola tamin'ny fotoana ny fanomezam-pahasoavana dia omena na ny fotoana ny fahafatesana. Izany dia mitaky fa ny torohevitra sarobidy ho an'ny fananana toeram-ponenana sy ny fialan-tsasatra trano dia tokony ho nametraka ny vidin'ny tamin'izany fotoana izany fahazoana. Ho an'ny toeram-piompiana sy ny ala, izany dia midika fa ny ambony indrindra ny torohevitra sarobidy ho an'ny mpandray dia ¾ ny fananana eo ho eo amin'ny varotra zava-dehibe. Afaka izaho dia manafoana ny fanomezana izay efa nomena.
Ny tetezamita fitsipika efa nampidirina
Tsy misy, raha ny fanomezana efa omena, tsy azo foanana intsony amin'ny fomba izay misy fiantraikany eo ny hetra kajy. Ny fisintonana ny fanomezana mitaky ny mety ho avo roa heny ny hetra. Efa nanolotra ny fanomezana alohan'ny iray volana janoary, nefa tsy nanaiky ny fanambarana. Tsy maintsy hanolotra ny fanomezana ity fanambarana ity.
Na raha toa ianao mametraka ny fanambarana ny taona, na taty aoriana, ny fanomezam-pahasoavana dia iharan'ny hetra.
Reny - ray mitana zaraina ny fizakana ny toetrany. Dia fanomezana nomena avy amin'ny zaraina toetrany tamin'ny ho foto-kevitra mba lovany ny hetra.
Reny - ray mitana zaraina ny fizakana ny toetrany.
Dia fanomezana nomena avy amin'ny zaraina toetrany tamin'ny taona, na taty aoriana ho foto-kevitra mba lovany ny hetra. Tsy misy Efa nandray fanapahan-kevitra momba ny nahemotra ny fizakana. No tsy maintsy handoa ny lova hetra aho raha toa ka hahazo ny fizakana ny taona, na taty aoriana. Tsy misy Ny fahafatesana nitranga tamin'ny. Dia izaho aza hetra lovany raha tsy manaiky ny lova fampahafantarana ny taona.
Tsy misy, ny fotoana ny fahafatesana dia ny fanapahan-kevitra zava-dehibe.
Isorohako ny hetra lova amin'ny alalan'ny fangatahana ho an'ny daholobe ny fisarahana. Tsia, izany no tsy misy fiantraikany ny hetra kajy raha mbola ny fotoana ny fahafatesana dia tamin'ny na ny teo aloha. Inona no mitranga rehefa ny fotoana ny fahafatesana dia ny taona, na taty aoriana. Ianao dia tsy maintsy mandoa lova hetra. Izany dia mihatra ihany koa raha maty ny olona nihazona zaraina ny fizakana ny toetrany.
No tsy maintsy handoa ny lova hetra eo amin'ny lovany avy ny maty voalohany. Tsy misy, raha tsy ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny vady mbola velona amin'ny iray volana janoary. Inona no hetra fitohizan'ny midika. Ny mpandova sy ny mpandray handray ny maty ny olona na ny mpamatsy vola ny torohevitra sarobidy.
Inona no hetra discontinuity midika.
Ny fananana ny vidin'ny no ho mpandova sy ny mpandray ny torohevitra sarobidy.
Inona no torohevitra sarobidy ho lazaina.
Izany no vidiny ny olona maty na ny mpamatsy vola karama ho an'ny fananana (fitohizan'ny), na ny zava-dehibe tamin'ny fotoana ny mpandray lasa ny tompony (discontinuity). Ny torohevitra sarobidy ho ampiasaina amin'ny misy tombom-barotra kajy raha toa ka hivarotra ny fananana. Handeha aho mba handova - efa nandova - manana nahazo andro tsy fiasana an-trano avy amin'ny ray aman-dreniko. Izy ireo efa nanana sy nampiasa izany mihoatra ny dimy ao anatin'ny valo taona farany. Inona no torohevitra sarobidy Ny torohevitra sanda an-tsena ny lanjany amin'ny fotoana transferal, satria maty ny olona - mpanome afaka nivarotra izany hetra maimaim-poana. Handeha aho mba handova - efa nandova - efa nandray ny fananana toeram-ponenana avy amin'ny ray aman-dreniko. Izy ireo efa nanana sy nonina tany izany bebe kokoa noho ny iray amin'ny roa taona farany. Inona no torohevitra sarobidy Ny torohevitra sanda an-tsena ny lanjany amin'ny fotoana transferal, satria maty ny olona - mpanome afaka nivarotra izany hetra maimaim-poana. Handeha aho mba handray - efa nandray ny fanofana fananana izay efa nodimandry olona mpanome dia mety tsy mivarotra hetra maimaim-poana. Ohatrinona ny hetra - lovany hetra no tsy maintsy mandoa vola. Raha toa ka handova - handray izany fananana talohan'ny iray volana janoary, ny torohevitra sarobidy dia nametraka ny vidin'ny tamin'ny transferal sy lova hetra ho kajy. Raha toa ianao mandray ny fananana taorian'ny amby telo-iray volana desambra, dia handray ny maty ny olona - mpanome ny torohevitra sarobidy sy lova hetra dia tsy kajy. Handeha aho mba handray - nahazo andro tsy fiasana an-trano fa maty ny olona - mpanome dia tsy nampiasa ny tenany ny dimy anatin'ny valo taona farany, ka noho izany dia tsy afaka mivarotra hetra maimaim-poana.
Ohatrinona ny hetra - lovany hetra no tsy maintsy mandoa vola.
Raha toa ka handova - handray izany fialan-tsasatra an-trano alohan'ny iray volana janoary, ny torohevitra sarobidy dia nametraka ny vidin'ny tamin'ny transferal sy lova hetra ho kajy.
Raha toa ianao mandray ny fialan-tsasatra an-trano telo-polo taorian'ny-iray volana desambra, dia handray ny maty ny olona - mpanome ny torohevitra sarobidy sy lova hetra dia tsy kajy. No transference ny fananana mba ho voasoratra ara-panjakana. Tsia, fa tsy maintsy atao ny tahirin-kevitra amin'ny fotoana inona ny fananana omena ny mpandray.
Ahoana no hanokatra kaonty amin'ny banky any Norvezy - TransferWise
Հարկի վերացումը ժառանգության Նորվեգիայում
© 2021 Ny mpisolovava ny Norvezy! Zavatra Mpisolovava, ny ara-dalàna vavahadin-tserasera.